Ikraan Caraale Oo Wacdaro Ka Dhigtay Bandhig Faneed Weyn Lagu Qabtay Goobaha Olympikada London
Xaflad weyn oo loogu tala galay soo dhaweynta iyo isku diyaarinta ciyaaraha aadka loo wada sugayo ee London Olympic Games 2012, waxaana kasoo qeyb galay fanaaniin ka kala socotay aduunka dacaladiisa sida Afrika, Asia, Yurub iyo America.
Waxaa kooxahan iyo fanaaniintan loo kala qeybiyay deegaan dhuleedka ay leeyihiin sida Geeska Afrika, Galbeedka Afrika, Latin America, Bariga Fog iwm. waxaana dalkeena Sooomaaliya oo dhaca geeska Afrika ay qeyb ku wada jireen dalalka Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea.
Fanaanada caanka ah ee da,da yar Ikraan Mohamed caraale ayaa u taagneyd astaanta iyo Luqada dalkeena marka ay noqota soo bandhigida heesaha aan caanka ku nahay, waxaana dhanka ciyaaraha aad loola dhacay hab ciyaareedkii hidaha iyo dhaqanka ay kusoo bandhigayeen dhalinyaro reer Ethiopia ah oo loo xulay inay ku ciyaaraan heesaha dalalka aan kor kusoo xusnay.
Waxaa goobta xaflada joogay shabakadan deeyoo.com oo nasiib u yeelatay inay noqoto tan kaliya ee Soomaalida ah ee xaadirka ku ahayd bandhig faneedkan cajiibka ahaa oo ay kasoo qeyb galeen kumanaan dadweyne ka kala socday qowmidiyaha aduunka.
Waxaana idinkaaga soo qabanay Clip ama Video yar oo aan ugu taka galnay inaad nala aragtaan sida ay wax u dhacayeen iyo hab faneedkii ay soo bandhigtay Ikraan caraale oo aad loola dhacay dhamaan kumanaankii dad ahaa ee kasoo qeyb galay.
Festivalkan ama bandhig faneedkan ayuu u noqonayaa Ikraan caraale mid ay magac iyo horumar ku gaarto fankeeda ah, waxa ayna sidoo kale dhiiri gelin u noqoneysaa dhamaan fanaaniinta kale ee jecel inay hiigsadaan heer caalami ah mustaqbalka dhaw iyo kan fog intaba.
Hadii aan nahay bahda deeyoo waxaan halkaan uga hambalyeyneynaa Ikraan caraale iyo horumarkeeda faneed, waxaa sidoo kale amaan mudan Liibaan, Akiila iyo Omar Teesiyow oo dhiirigelinayay iyo ugu danbeyn Bushaaro iyo Hibaaq oo mar walba la garab taagnaa hiil iyo hoo aan hagar lahayn tan iyo soo hanaqaadka fankeeda.
Daawasho wacan Ikraan caraale iyo heesta Hobeeya.
London / Uk	Latest News